Sekretera Jeneralin'ny fahatelo Antenimieran'ny Ningbo avy hatrany offsite Salon - China Yuyao Hengwei Hose Clamp
Aprily 25 maraina, ny Sekretera-Jeneralin'ny Ningbo tanàna ambany Alien Antenimieran'ny Varotra Antenimieran'ny varotra nampiantrano ny Quzhou Salon fahatelo, nivory tao amin'ny Antenimieran'ny varotra orinasa mpikambana Quzhou, Quzhou ny fivoaky ny fivarotana trondro Siming Road.
Mandray anjara amin'ny Ity efi-trano Sharon Hangzhou sy Wenzhou Antenimieran'ny varotra, ny Antenimieran'ny varotra, Heilongjiang, Anhui Antenimieran'ny varotra, ny Antenimieran'ny varotra, Shandong, Sichuan Antenimieran'ny varotra, Antenimieran'ny Quanzhou, Jiaxing Antenimieran'ny varotra, Antenimieran'ny Chizhou, Jinhua Antenimieran'ny varotra, ny Antenimieran'ny varotra sy ny hafa tariby sy ny telegrama tsipika mihoatra ny 40 Sekretera Jeneraly.
Sharon olana lohahevitra hoe "Ahoana no hilalao ny anjara asan'ny mpanara-maso ny solaitrabe ny hoe:" Izaho dia 沈培荣 Chizhou Antenimieran'ny mpanara-maso sy ny Biraon'ny mpanara-maso Yerong Bin nanasa toy ny vahiny mpandahateny.
Rehefa nifarana ny Salon, Quzhou Antenimieran'ny Varotra lefitra Sekretera Jeneralin'ny Wang Qinghua naneho hevitra pihetseham-po, maharitra roa mpanara-maso traikefa mampiditra tena mahasoa ny boky, dia mendrika ny fianarana. Board ny mpanara-maso mba hanao ny asa tsy maintsy atao: Voalohany, aoka ny Biraon'ny mpanara-maso ao amin'ny Antenimieran'ny varotra ao amin'ny "One"; Board faharoa maso mihitsy mba ho "fanantenana"; dia ny Biraon'ny mpanara-maso ny manao zavatra tsy afaka "hatahotra."
Minisitry ny Indostria sy ny varotra mpikambana departementan'i la Ningbo Xu Xiaohua, lefitry ny minisitry ny Minisitry ny 李安奎 nasaina ihany koa ny mpikambana mba handray anjara amin'ny fiaraha-mientana. Xu Xiaohua, Minisitra lefitra sy ny minisitry ny Salon 李安奎 nomena avo ampy, manantena ny fitondran-tena toy izany amin'ny ho avy be dia be ny asa ilaina, mba ho zava-baovao asa offsite Antenimieran'ny Varotra.